Ungazivala kanjani izaziso ku-iPhone | iPhone News
U-Ignacio Sala | 31/03/2022 18:00 | iPhone, Okokufundisa namanyuwali
Kulesi sihloko sizokukhombisa uvala kanjani izaziso ku-iphone, i-iPad ne-iPod touch. Izaziso ziwusizo inqobo nje uma sazi ukuthi zingaphathwa kanjani, ngoba, ngaphandle kwalokho, zingase zisiphikisa futhi zicasule kakhulu kunokuba zisebenziseke.
Into yokuqala okufanele siyicabangele ngaphambi kokukhubaza izaziso ukucabangela ithuba lokuzithulisa okwesikhashana. Ukuthulisa izaziso ngokuvamile kuyisixazululo esingcono kakhulu uma uhlelo lokusebenza oluthile (olufana ne-WhatsApp) lugcina izaziso (ikakhulukazi ezivela eqenjini) kodwa asifuni ukuthulisa iqembu noma ukukhubaza izaziso zohlelo lokusebenza.
1 Ungazivala kanjani izaziso ku-iPhone
2 Ungazithulisa kanjani izaziso ku-iPhone
3 Vula izaziso ku-iPhone
4 Gxila kumamodi ku-iOS / iPadOS
4.1 Uyenza kanjani imodi yokugxila yangokwezifiso
5 Ungazisebenzisa kanjani izindlela zokuhlushwa
I-iOS isinika izindlela ezimbili zokukhubaza izaziso ku-iPhone:
Kusuka kunoma yisiphi isaziso sohlelo lokusebenza esifuna ukususa izaziso (uthethelele ukuphindiselwa kabusha), sislayidela kwesokunxele.
Okulandelayo, chofoza ku Izinketho.
Kusukela kokukhethwa okuhlukile okukhonjisiwe, siyakhetha Yenza kungasebenzi.
Kusukela kulo mzuzu kuqhubeke, uhlelo lokusebenza ngeke lubonise noma yiziphi izaziso kudivayisi yethu size sizenze zisebenze futhi.
Indlela yesibili yokukhubaza izaziso ku-iPhone ayizwakali kangako futhi idinga ukuthi sifinyelele izinketho zokucushwa kwe-iOS ngokwenza lezi zinyathelo engikubonisa zona ngezansi:
Kusukela esikrinini sasekhaya sifinyelela ku- Izilungiselelo ye-iPhone yethu.
Okulandelayo, chofoza ku Izaziso.
Okulandelayo, sikhetha ifayela uhlelo lokusebenza esifuna ukususa kulo izaziso.
Ngaphakathi kwezinketho zezaziso zohlelo lokusebenza, senza kungasebenzi inkinobho Nika amandla izaziso.
Ungazithulisa kanjani izaziso ku-iPhone
Uma esikhundleni sokuvala zonke izaziso kuhlelo lokusebenza futhi usivimbele ukuthi singakhohlwa ukuzivula futhi, inketho engcono kakhulu ukuzithulisa isikhathi esithile.
I-Apple isivumela ukuthi sithulise izaziso ihora lonke usuku lonke. Ukuthulisa izaziso ku-iPhone, kufanele silandele izinyathelo engikubonisa zona ngezansi:
Sislayida noma yisiphi isaziso sohlelo lokusebenza ukuze sithule kwesokunxele.
Kusukela kokukhethwa okuhlukile okukhonjisiwe, siyakhetha
thula ihora elingu-1
Uma uhlelo lokusebenza luqhubeka nokuthumela izaziso ngemva kwesikhathi esisimisile, singazithulisa futhi ngokwenza izinyathelo ezifanayo.
Vula izaziso ku-iPhone
Ezinye izinhlelo zokusebenza, ngaso sonke isikhathi uma sizivula (ezifana ne-WhatsApp) hlola ukuthi ingabe sinazo yini izaziso ezicushiwe. Uma kungenjalo, isimema ukuthi siphinde siwasebenzise. Uma uhlelo lokusebenza esenze izaziso zangasebenzi, lungasibonisi ukufinyelela ukuze sikwazi ukuzisebenzisa futhi, kufanele senze izinyathelo engikubonisa zona ngezansi:
Ngaphakathi kwezinketho zezaziso zohlelo lokusebenza, sisebenzise iswishi Nika amandla izaziso.
Gxila kumamodi ku-iOS / iPadOS
Ngokukhululwa kwe-iOS 15 ne-macOS Monterey, i-Apple yethule isici esisha esibizwa Izindlela zokuhlushwa.
Lezi zindlela zokugxila zisekelwe kumodi evamile ye-iOS ethi Ungaphazamisi. Asekelwe kumodi yokungaphazamisi, kodwa isivumela ukuthi silungiselele ukuthi yiziphi izinhlelo zokusebenza esifuna ukuzibonisa izaziso esikrinini futhi zidlale umsindo ngenkathi zisasebenza.
Ngokomdabu, i-iOS isivumela ukuthi sakhe izindlela ezilandelayo:
Ngayinye yalezi zindlela isungula ukucushwa okuthile okuklanyelwe yona ngqo. Isibonelo, uma sisebenzisa Imodi yokushayela, ngenkathi icushiwe, i-iPhone yethu:
Izothulisa zonke izaziso nemiyalo.
Itshela abathintwayo bethu ukuthi sinezaziso ezithulisiwe futhi ibavumela ukuthi bathumele isaziso uma kuyindaba ephuthumayo (itholakala kuphela kumadivayisi e-iOS).
Uma umuntu ozama ukuxhumana nawe ngenkathi le modi ivuliwe akanayo idivayisi ye-iOS noma ye-macOS, uzothumela impendulo ezenzakalelayo imazisa ukuthi asitholakali (nge-SMS).
Uyenza kanjani imodi yokugxila yangokwezifiso
Yize izindlela zokugxilisa ingqondo esinikezwa yi-Apple zilungele cishe noma yisiphi isimo, futhi zisivumela ukuthi sihlele ukuthi yibaphi abantu abangaba gxuma ngaleyo ndlela yokuxhumana nathi, into engcono kakhulu ukudala eyodwa evumelana nezidingo zethu.
Ukwakha imodi yokugxilisa ingqondo yangokwezifiso, kufanele senze lezi zinyathelo ezilandelayo:
Okokuqala, siya kuzilungiselelo zedivayisi yethu.
Ngaphakathi kokuthi Izilungiselelo, chofoza ku-Concentration modes bese uchofoza uphawu lokuhlanganisa olutholakala ekhoneni eliphezulu kwesokudla.
Okulandelayo, chofoza Custom.
Into yokuqala okufanele siyenze ukusungula igama lemodi esizoyakha, khetha isithonjana esifuna ukusimela kanye nombala waso ohambisanayo.
Ngemuva kwalokho esigabeni Abantu bavunyelwe, chofoza uphawu + lokuthi Faka bese ukhetha bonke abantu abangasithinta, ngisho noma siye sayisebenzisa le modi.
Uma singakufuni lokho akukho muntu osihluphayo ngenkathi sisasebenza le modi, esigabeni sabanye abantu sikhetha Akekho.
Chofoza okuthi Vumela ukuze uqhubeke nokumisa le modi.
Ewindini elilandelayo, kufanele sikhethe izinhlelo zokusebenza ezingasithumelela izaziso ngenkathi sisasebenza le modi.
Kungenzeka ukuthi ezinye izinhlelo zokusebenza zizoboniswa ngokuzenzakalela, izinhlelo zokusebenza esingazisusa ngokuchofoza susa konke.
Ukukhetha izinhlelo zokusebenza esifuna ukuzengeza mathupha, chofoza + uphawu lokuthi Engeza esigabeni Sezinhlelo Zokusebenza Ezivunyelwe.
Esigabeni Ezinye Izinhlelo zokusebenza, singamaka ibhokisi elithi Okubalulekile. Leli bhokisi likaqhwishi lizovumela ezinye izinhlelo zokusebenza ezingafakiwe kwezivunyelwe ukuthi zithumele izaziso ezimakwe njengezibalulekile.
Uma sesidale imodi yokugxilisa ingqondo, singayihlela ukuze sengeze noma sisuse ezinye izinhlelo zokusebenza. Ngaphezu kwalokho, singase futhi silungiselele imodi ukuthi ivule futhi ingasebenzi nge-automation noma ngokusekelwe ohlelweni.
Ungazisebenzisa kanjani izindlela zokuhlushwa
Uma sesidale imodi yokugxilisa ingqondo esiyidalile, kufanele silandele lezi zinyathelo:
Sifinyelela isikhungo sokulawula ngokuslayida umunwe wakho usuka phezulu kwesokudla sesikrini (noma kusukela phansi uma kuyi-iPhone 8 noma ngaphambili).
Okulandelayo, sichofoza ku-Concentration ukukhombisa zonke izindlela ezitholakalayo.
Uma sifuna ukuyenza isebenze size siyivale mathupha, siyayichofoza.
Kodwa, uma sifuna ukuyivula ihora, kuze kube usuku olulandelayo noma size sihambe lapho sikhona, sichofoza amaphuzu angu-3 avundlile atholakala kwesokudla segama lemodi.
Isithonjana semodi yokusetha sizovezwa phezulu esikrinini nasesikrinini sokukhiya. Ngale ndlela, sizokwazi ngokushesha uma sinemodi yokuhlushwa evuliwe nokuthi iyini.
Indlela ephelele ye-athikili: Izindaba ze-IPhone » iPhone » Okokufundisa namanyuwali » Ungazivala kanjani izaziso ku-iPhone
I-Apple ikhipha i-iOS 15.4.1 ukulungisa izinkinga zebhethri